Ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Amisom, ayaa howlgalo roondooyin ah waxa ay ka sameeyaan Magaalada Kismaayo(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Amisom, ayaa howlgalo roondooyin ah waxa ay ka sameeyaan Magaalada Kismaayo(Daawo Sawirada)
Ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Amisom, ayaa howlgalo roondooyin ah waxa ay ka sameeyaan Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose.
Ciidamada ayaa Xaafada Via Afmadoow ee magaalada Kismaayo waxa ay ka sameeyeen howlgal gaadiidka lagu baaraayo, waxaana ciidanka la socday oo howlgalka Baarista sameynaayay ciidamada Jubbaland.
Magaalada Kismaayo oo amnigeeda uu noqday mid soo hagaagaya, ayaa tani waxa ay qayb ka tahay howlgalada ciidamada ay ku sugayaan ammaanka Magaalada Kismaayo.
Ciidamada Burundi oo lagu bedelay ciidanka Sierra Leon ee laga bedelay Magaalada Kismaayo, ayaa waxa ay isku dayayaan inay kasbadaan Bulshada Magaalada Kismaayo oo wada shaqeyn wanaagsan ay dhexmarto.
Gaadiidka ciidamada ay baarayaan ayaa ah kuwa ka baxa Magaalada iyo kuwa soo galaya, waxaana la hubinaya amniga gaadiidkaasi iyo waxa saaran intaba.
Howlgalada joogtada ah ee ammaanka lagu sugo Magaalada waxaa ka sameya ciidamada Maamulka Jubbaland.
Fadhiga 7-aad ee Baarlamaanka Somaliya ayaa si rasmi ah u furmay